‘लकडाउन’ मा साहित्यकार ! कोही लेखपढमा, कोही सामाजिक सञ्जालमा
२०७६ चैत ११ मंगलबार १०:४७:००
काठमाडौं । यतिबेला साहित्यकर्मीहरू पनि घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइन (एकान्तबास) बिताइरहेका छन् । आज तिनको दिनचर्या पढ्नु र लेख्नुमा सीमित भएको छ । साहित्यकार र कविहरूको जमघट विमोचन, कवि गोष्ठी, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा हुँदै आए पनि अहिले सबैले आफूलाई आफ्नो घरमै संकुचन गरेका छन् । सुरक्षित गरेका छन् । यतिबेला घरमै बस्दा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लाई जित्न सकिने सबै एकमत छन् ।
तथापि, तिनको रचनात्मक कार्यमा कुनै कमि आएको छैन । घरमा बसे पनि लेखाइ-पढाइमा तिनको समय बित्ने गरेको केही साहित्यकर्मी बताउँछन् ।
कवि छविरमण सिलवालसँग फोन सम्पर्क गर्दा उनी ठमेलमा थिए । पर्यटकीय स्थल ठमेलमा छविरमणको गार्मेन्टको व्यवसाय रहेकाले पनि उनी थोरै समय निकालेर सोमबार अपराह्न ठमेल पुगेका थिए । तर सुनसान ठमेलमा केही क्षण बिताएर आफू घरै फर्किने उनी बताउँदै थिए ।
ठमेलको सन्नाटामा रुमल्लिएका छवि भन्छन्, “अब घरै फर्किने हो । र घरै बस्ने हो । घरमै बस्दा कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ । म मात्र होइन, हरेक नेपालीले यसतर्फ ध्यान पु¥याउने बेला भएको छ ।”
कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वका धेरै मुलुक आक्रान्त बनेको छ । युरोप र अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकलाई समेत धौधौ बनाएको कोरोना भाइरसले नेपालीलाई नछोओस् भनेरै सरकारले आउँदो एकसातासम्म देशैभर ‘लकडाउन’ गर्ने निर्णय गरेको छ । लकडाउनमा कोही पनि बाहिर निस्कन नपाउने भनिएको छ ।
केही दिनदेखि आफू घरमै बसेको बताउँछन् साहित्यकार तथा स्रष्टा समाजका संरक्षक पवन आलोक । आजको अप्ठेरो परिस्थितिमा कोरोना भाइरससँग जुझ्ने दरिलो आधार भनेकै स्टे–होम अथवा सेल्फ क्वारेन्टाइन भएकोले सबैले घरमै बसेर राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
यो समय लेख्ने पढ्नेहरूका लागि उपयुक्त समय भएकोले यतातिर पनि उनको समय बित्दो छ । उनी लेखपढमा समय खर्चिरहेका छन् । यतिबेला मुलुक लकडाउनको स्थितिमा रहेकाले हरेकले लापरबाही नगरेर घरै बस्न पनि उनी सुझाउँछन् ।
पवन आलोक भन्छन्, “हामी नेपालीको एउटा प्रवृत्ति छ, कुनै पनि कुरालाई गम्भीरतापूर्वक नलिने ! हल्लाको पछाडि लाग्ने र लापरबाही गर्ने । यतिबेला हामीले लापरबाही नगरेर गम्भीर हुने बेला आएको छ । यसले नै हामीलाई कोरोना भाइरसबाट बचाउँछ ।”
कवि तथा साहित्यकार वियोगी बुढाथोकी बिहानको केही समय मर्निङवाकमा खर्चिने बताउँछन् । त्यसपछि दिनभर घरमै बसेर आफ्नो सम्पादनमा प्रकाशन हुँदै आएको साहित्यिक पत्रिका ‘शिवपुरी सन्देश’को काममा लाग्ने गरेको बताउँछन् ।
कवि बुढाथोकी भन्छन्, “नेपाली नागरिकको आत्मबल दह्रो छ । कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्न तिनले सक्छन् । तर त्यसका लागि हामी सबै सतर्क हुनु जरुरी छ । हामीले हेलचेक्राइँ ग¥यौं भने त्यसको परिणाम हामी सबैले भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । तसर्थ, घरै बसौं ।”
यतिबेला भीडमा जानुलाई खतरापूर्ण मानिएको छ । सबैभन्दा उत्तम घरको बास नै हो । यसलाई सबैले स्वीकारेका पनि छन् । यद्यपि, घरै बसे पनि लेखक कविले आफ्ना रचनाका माध्यमबाट कोरोना विरुद्ध सचेतना फैलाउँदै आएका छन् । कवि बुढाथोकीले आफूले यस्तै कविता सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दैआएको बताए ।
सामाजिक सञ्जाललमा बुढाथोकीको कविताले भन्छ,
मुलुक सुनसान हुनुको कारण, सहर गाउँ गएको छ
विदेशिएकाहरू उतै सुरक्षित हनु पर्ने भएको छ
आउनुस् जो जहाँ छौं, मिलेर सावधानी अपनाऔँ
यता कोरोनाको चिन्ताबाट, सिंगो देश नै रोएको छ ।
कवि विधान आचार्य पनि घरै बसेर कविताका माध्यमबाट कोरोनाविरुद्धको सचेतना फैलाउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्छन् । कवि आचार्य पनि यतिबेला घरमै बसी रचनात्मक काममा लागेको बताउँछन् ।
यतिबेला राज्यले निर्देशित गरेका विषयहरूमा प्रत्येक नेपालीले गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘तर यतिबेलाको अवस्था देख्दा हामीले यसलाई खासै महत्त्व दिइरहेका पो छैनौं कि ?’ भन्ने उनको आशंका छ ।
कवि विधान भन्छन्, “हालैका दिनमा कवि गोष्ठी, किताब विमोचन भएको पनि देखियो । जुन नहुनुपर्ने थियो । मन्त्री परिषद्को बैठक पनि भिडियो कन्फ्रेन्स कल सिस्टमबाट गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । र त्यसले सर्वत्र सकारात्मक सन्देश दिनेथियो । तर मिटिङमा मन्त्रीहरू सबै एकै ठाउँमा बसेको देखेपछि त्यसले सकारात्मक सन्देश देला र ?”
कवि विधान, यतिबेला सबै नेपालीले घरमै बसेर राज्यले गरेका निर्णयहरूलाई सहयोग गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई निस्तेज पार्न सकिने बताउँछन् ।